Soosaarayaasha iyo Shirkadaha Qaab-dhismeedka Qaab-dhismeedka Badan - Shiinaha Warshadda Caaryada ee Cufka Badan
Telefoonka: + 86-18823354971
Naqshadeynta & injineernimada
Wax soo saarka caaryada
Wax taaj oo kale duritaanka
Kulan & Qurxin
Xad dhaaf ah
Qaab elektaroonig ah
Qaab Cajiib ah
Qaab Qalabka Caafimaadka
Caaryada caaga ah ee khaaska ah
Hal toogasho & 2K Caaryada
Qaab duritaanka sax ah High
Cold Runner & Hot Runner Qaab
Wasakhda duritaanka caaga
Custom Qaab duritaanka duritaanka Custom High qiray ...
Custom OEM saaraha sameynta caaryada
Shirkad caadeysiin ah oo caadeysi ah
Caaryada Custom samaynta iyo design
8 godad caaryada duritaanka caaga elektarooniga ah
Macaamiisha badankood waxay doorbidaan caaryada daloolka badan maadaama ay keydin karto qarash badan oo wax soo saar, laakiin kahor intaadan go'aan gaarin, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso qodobo qaar.
8 Qaab duritaanka Caaga ah
Marka ay timaado qaabeynta qaabdhismeedkaaga isku-xirnaanta daloolka badan, saxsanaanta iyo joogtayntu waa furaha alaabada dhammeystiran ee tayada leh.
48 Godad daloolada qalabka guryaha ka samaysan
Haddii cabirka sheygu yar yahay, badiyaa wuxuu dhisaa 24 ama 48 godad, waa in la sheegaa sababta 30 ama 40 godod loo samayn waayey.
Tani waa sababta oo ah si loo dheellitiro qaabka caaryada iyo dheelitirka buuxinta walxaha, gaar ahaan caaryada Cold runner marka la isticmaalayo.
Waa maxay Qaab-dhismeedka Dhabku?
Caarya-badeedyo fara badan ayaa ah caarbid cirbad leh oo leh wax ka badan hal dalool isla qaybtaas, caaryada waxaa loogu talagalay inay soo saarto dhufasho isku mid ah inta ay socoto wax soo saar kasta.
Wasakhahaasi duritaanka Multi-daloolka waxaa badanaa loo isticmaalaa wax soo saarka mugga sare tan iyo markii ay kuu ogolaaneysaa inaad si hufan u isticmaasho waqtiga wareegga oo aad soo saarto qaybo badan oo ka mid ah isla caaryada isla dammaanadda tallaalka.
Waa Maxay Faa'iidooyinka Qaab-durmooyinka Isku-duritaanka Meelo Badan?
Qaab-godad badan ayaa ku jira godad badan oo isla qaybtaas ah. Waxay soo saari kartaa tiro badan oo qaybo ah wareegga wax taaj oo kale ee duritaanka, oo aad ugu habboon wax soo saar ballaaran. Faa'iidooyinka kale ee muuqda waxaa ka mid ah:
Waqtiga gaarsiinta oo gaagaaban: Maaddaama qaybo badan la dhammaystiri karo wareeg kasta, kootada si dhakhso leh ayaa loo gaari karaa ..
Yaree kharashka caaryada: Marka loo barbardhigo sameynta afar wasakh oo kala duwan, caaryada leh afar godad ayaa ka jaban oo leh qiimo jaban oo lahaansho.
Qiimaha qaybaha hoose: Wadarta shaqada iyo waqtiga mashiinka ee qaab-dhismeedyo fara badan ayaa ka gaaban, taas oo yareyneysa qiimaha qaybaha.
Dalbo xajmiga: Way adag tahay in la daboolo baahida loo qabo hal milyan oo qaybood oo leh hal caaryo dalool ah. Wasakhda-godad badan ayaa kuu oggolaanaya inaad amarro waaweyn ku dhigto waqtiga.
Hal Caar VS. Qaab Moodo-badan, oo kufiican mashruucaaga?
A hal caaryada dalool wuxuu soo saari doonaa hal wareeg, halka caaryada godad badani ay soo saarto wax ka badan hal shey halkii wareeg.
Guud ahaan, xulashada hal caaryo ama caaryo fara badan waxay kuxirantahay waqtigaaga iyo baahidaada. Markii loo baahdo qaybo isku mid ah oo mug leh oo isku mid ah gudahood waqti go'an, caaryada-godad badan ayaa badanaa xulashada ugu fiican. Wasakhahaasi caaryado-badan oo saqaf ah ayaa awood u leh inay abuuraan qaybo badan, si dhakhso leh gudahood dammaanadda tallaalka.
Si kastaba ha noqotee, qaab-dhismeedyo fara badan oo kala duwan ma aha ikhtiyaarka ugu fiican dhammaan mashaariicda. Caarya-badeedyo fara badan ayaa u baahan maalgashi horumarsan oo aad u fara badan marka loo eego caaryada hal-god. Way ka qaalisan tahay in la abuuro wasakhyo badan oo daloollo leh maxaa yeelay waxay u baahan yihiin qalab, xoog, iyo tamar badan marka loo eego hal caaryo-dalool.
Haddii aad soo saarto qaybo heer sare ah, maalgashiga qaab-dhismeedka isku-duwidda godad badan ayaa hubaal bixin kara.
Laakiin marka la eego mugga hoose, waxaa macno samayn kara in loo qaato qaab caaryo keliya ah.
Wasakhda Multi-Cavity VS. Qaababka Qoyska:
Kee baa ugu fiican baahiyahaaga? Qaababka isku-duritaanka ee godad badan ayaa mararka qaarkood lagu jahwareeraa caaryada irbadaha qoyska, laakiin labaduba aad ayey u kala duwan yihiin.
In kasta oo caaryada duritaanka qoyska sidoo kale ay ku jiraan godad badan, godadkaasi isku mid ma aha, waxaa loo isticmaalaa in lagu abuuro qaybo kala duwan oo badeecad hal mar ah.
In kasta oo caaryada qoysku ay sidoo kale ku jiraan godad badan, haddana qaybaha la soo saaray waxay wadaagaan cabir la mid ah laakiin naqshado kala duwan. Tusaale ahaan, haddii qaybtaadu u baahan tahay laba qaybood oo kala duwan oo qiyaasti le'eg, waxaad u isticmaali kartaa qalabkan inaad ku soo saarto isla waqtigaas. Waxay leedahay faa'iidooyin isku mid ah caaryada godad badan, laakiin waxay leedahay faa'iidooyin kale:
• hoos u dhig wadarta miisaaniyadaha qalabaynta
• Waxsoosaarku wuu kordhayaa ilaa laba ama in ka badan oo qaybood oo lagu soo saaray hal wareeg oo duritaan ah
• Awoodda amarka-hooseeya: Caaryayaasha la isku duro ee qoysku waa kuwo wax-ku-ool ah oo loogu talagalay amarrada hooseeya, maadaama aanad u baahnayn inay ku shaqeeyaan qaabab kala duwan
• Ku habboon tahay nooc ahaan, maaddaama badeecada si buuxda loo ururin karo iyadoo la adeegsanayo hal nooc oo caaryada qoyska ah, waxay yareyn kartaa kharashyada soo-saarka ka hor.
Si kastaba ha noqotee, sababtoo ah qaababka kala duwan ee godadka ku jira caaryada qoyska, way adkaan kartaa in la ilaaliyo joogteynta inta lagu jiro wax soo saarka qayb, taas oo markaa sii kordheysa halista aad ugu jirto cilladaha.
Qaab-dhismeedka saxda ah ee wax soo saaraha iyo wax soo saarka
No.5, Wadada Guihua, Tangxia Yong Community, Songgang Town, Degmada Baoan, Shenzhen. Shiinaha. 518105
Right Xuquuqda daabacaadda - 2010 - 2021: Guangdong Yuanfang Technology Industry Co., Ltd. Dhammaan xuquuqda ayaa la keydiyay. Alaabada Kulul - Khariidadda bogga
Caaryada Custom, Wax taaj oo kale duritaanka Iyadoo bir biraha, Warshadda caaryada, Samaynta Qaab Muunad, Soosaarayaasha caaryada, Wax taaj oo kale galinta caaga ah,